Shiinaha Soosaarayaasha korantada korontada ku shaqeeya ee Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Vishi
Silsiladda korontada ku shaqeysa waxay leedahay hal soo bixid iyo labalaab ah, taas oo ah, usha bistooladdu hal jiho ayey u dhaqaaqi kartaa labo-waddona waxaa lagu dhaqaajin karaa laba nooc.
Dhululubo ah Haydarooliga waa actuator jilaa oo beddelaya tamarta Haydarooliga galay tamar farsamo iyo sameeya celinta (ama oscillating mooshin) in line a toosan.Waa sahlan tahay qaab dhismeedka oo lagu kalsoonaan karo hawlgalka. aaladda waa la saari karaa, mana jiro farriin gudbinta, dhaqdhaqaaqa waa xasilloon yahay, sidaas darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhammaan noocyada nidaamka hawo-farsameedka.
Awoodda soo-saarka ee silsiladda hawo-qaadashada ayaa u dhiganta aagga wax ku oolka ah ee bistoolada iyo farqiga cadaadiska labada dhinacba. Haydarooliga dhululubo wuxuu asal ahaan ka kooban yahay foosto silsilad ah iyo madaxa silsiladda, piston iyo rod piston, qalabka wax lagu xiro, qalabka wax lagu keydiyo iyo qalabka qiiqa. Qalabka wax lagu shubo iyo qalabka qiiqa waxay kuxiranyihiin arjiga gaarka ah; aaladaha kale waa lama huraan.
Darawalada Haydarooliga waxay leeyihiin dhululubado iyo matooro u roga tamarta cadaadiska dareeraha tamar farsamo oo soo saarta. Silsiladdu inta badan waa wax soo saar toosan iyo xoog.
Dhululubo Haydarooliga ah waxay leedahay qaabab kala duwan, iyadoo loo eegayo astaamaha kala geddisan ee farsamadeeda waxaa loo kala qaybin karaa nooca bistoolada, nooca tuubbada iyo nooca lulid saddex qaybood ah, iyadoo loo eegayo qaabka ficilka loo kala qaybin karo ficil keliya iyo fal laba-laab ah.
Birta bileyska, silsiladda tuubada ayaa inta badan loo adeegsadaa: mashiinada, sida qodista; Cilmi baarista cilmiga, sida sheybaarka qaabdhismeedka jaamacadda.
Mashiinka hawo-qaadista ee oscillating-ka ah waa hawl-wade kaas oo soo saari kara miisaanka isla markaana xaqiijin kara dhaqdhaqaaqa isu-celinta. Waxay leedahay qaabab dhowr ah sida hal vane, vane laba jibbaaran iyo oscillation muquuninta ah.Blade mode: baarka stator wuxuu ku xeran yahay aaladda dhululubo, daabkuna wuxuu ku xiran yahay rotor. Nooca wareega ee loo yaqaan 'swingral swing' wuxuu u qaybsan yahay lulid muquunis ah iyo laba helix laba jibbaar ah, hada labo helix ayaa si aad ah loo isticmaalaa, labada piston sidelobe ee muquuninta ah ee ku shaqeysa hawo-hawo-gacmeed toosan u dhaqaajinaya dhaqdhaqaaqa toosan iyo dhaqdhaqaaqa wareega dhaqdhaqaaqa , si loo gaaro mooshinka lulid.
Nidaamka Haydarooliga, adeegsiga silsiladda korontada ku shaqeysa si loo wado farsamooyin leh tiro cayiman, marka dhaqdhaqaaqa hawo-dhaqameedka illaa dhammaadka istaroogga uu leeyahay awood firfircoon oo firfircoon, sida howsha oo aan hoos u dhicin, piston-ka silsiladda iyo madaxa silsiladda ayaa dhici doona isku dhaca mashiinka, saameynta, buuqa, wax baabi'inta Si loo yareeyo oo looga hortago dhacdada waxyeelada noocan ah, sidaa darteed waxaa lagu dejin karaa qalabka hawo-mareenka loo yaqaan 'hydrop loop deceleration' ama waxaa lagu rakibi karaa qalabka wax lagu keydiyo.
Hore: YZU matoor Vacuum
Xiga: Dhululubada xoojinta gaaska-dareeraha
Dhululubada xayiran Horizontal